Ngwa N'ihi nnyocha On iPhone
Taa, -Amasị m ịkọrọ ụfọdụ bara uru ozi spyware na jailbreak maka iPhones.
iPhone nwere ike inwe ihe ọ bụla spyware nanị ma ọ bụrụ na ọ bụ jailbroken. Ma ọ bụghị, Ọ gaghị ekwe omume iji wụnye exactspy – Ngwa N'ihi nnyocha On iPhone ọ bụla iDevice dị ka ndị a bụ nwetara ngwaọrụ arụpụtara site Apple. exactspy ahụ na-akwanyere ya ùgwù karịa spyware ji N'oge na soro ma nyochaa ihe ọ bụla na ekwentị mkpanaaka, gụnyere iPhone os. Ma ọ bụrụ na mkpanaka gị bụ jailbroken, e nwere ihe gbasara nke puru omume na ị na-spied site na onye. exactspy na-arụ ọrụ a na zoro ezo ụzọ na adịghị ihe ọ bụla Pop acha ọkụ, ekwesighi faịlụ, Ịma Ọkwa ma ọ bụ mgbasa ozi na echichi. Onye ọrụ na onye mgbe a bịara mara ọ bụla ohere ka ha na-spied. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na gị na iPhone nwere ụfọdụ freebie ma ọ bụ obere oru oma software, a ga-enwe nsogbu ụfọdụ nke ị nwere ike mfe ikpe na mobile a na-spied. Adịghị ama ama, na mobile ọkọkpọhi ngwa ngwa ma ọ bụ shuts ala na-enweghị-enye iwu, ọ bụ nnọọ ihe puru omume na ọ na-esoro site na onye.
Ịwụnye exactspy – Ngwa N'ihi nnyocha On iPhone dị nnọọ mfe ma ọ na-ewe banyere ihe 10 nkeji ime ya iPhone. Ị nwere ike ọ gaghị na-eche banyere inwe a na ngwanrọ na mkpanaka gị, ma ya edidu-anọgide na-adịghị ahụ anya kpamkpam. Spyware nwere ike arụnyere na ekwentị mkpanaaka na ndị niile banyere ihe omume ndị mere na a mobile. Ndị a bụ ndị mere nkeji nkọwa na ekwentị gị ga-enye onye ọ bụla ọrụ elaborated ke nde ke nde ido. Ọ dịghị kpọmkwem ụzọ elele exactspy ọnụnọ gị iPhone. Ya mere,, mkpa na ị ga ntakịrị-amụ anya dị ka gị nne na nna, onye òtù ọlụlụ ma ọ bụ ndị ọzọ mmadụ nwere ike adịghị ahụ anya arụnyere exactspy – Ngwa N'ihi nnyocha On iPhone gị iPhone. Ha ga-ọbụna inwe niile nkọwa ọbụna ma ọ bụrụ na ị ekpochi na mobile ma ọ bụ disinclined ụfọdụ atụmatụ. Ọ na-arụ ọrụ n'ime effectual ụzọ iPhone na odomo kwa nti utịp ọzọ mobile usoro. Ị nwere ike ịlele ukara website nke exactspy ịhụ otú usoro na-arụ ọrụ ma na o nwere ike ọbụna-abara gị uru maka nnyocha nzube.
Na exactspy- Ngwa N'ihi nnyocha On iPhone na ị ga-enwe ike:
Ị nwere ike Download :”Ngwa N'ihi nnyocha On iPhone“
Ngwa N'ihi nnyocha On iPhone, How to spy on someones iphone, iPhone ngwa maka nnyocha na ederede ozi, Iphone spy app cydia, Iphone spy app detection, iphone nledo ngwa dịghị jailbreak, Iphone spy app reviews, Iphone spy app without jailbreaking